August, 2018 | Nhetembo - Detembai Titandare
Takaribika doro paMasoso, Ropa raMusikavanhu rofadzwa, Bva isu vanhu toropafadzwa, Chiya chamupupuri chamaichiva, Rotevera kuvhuvhuta dutu guru, Yakazonaya dzvotsvotsvo kumakomo, Yechimvuramabwe, matsanza semazai,…
Mwedzi wagara Ndira Pamusi wemba Ndira Nhasi uri pano Ndira Wemba wemba Ndira Kwigo Ndira Pu! Tenderekedziwe Enda nourwere hwangu
Kuya kutsime, Zuva nezuva, Kukwira nekudzika, Kaviri kana katatu, Kunochera chinwiwa chanyadenga, Pakuti tiri mvura patimire! Pawainzi enda kutsime, Udzoke wakadengezera, Mugoro wakati…
Kana uchiti zvinorwadza, Tiratidze acho maronda, Zvirege kuperera mukutaura, Mbiri yeugamba yaunozvipembedza, Kurura tione mavanga! Kubva muromo haupi, Ruoko ndirwo runogova, Zvino zvawakati…
The sun is up! A bright new dawn, Bringing renewed hope, To all and sundry but me, And my already hungry lot, Beaten…
Posted On 12 Aug 29 Jul
Mangwana dzinani Mangwana dzina Toriro Toriro dumbu guru gadzike